टि.आर.सि. पदाधिकारीका लागि ६४ जनाको आवेदन -NepalKanoon.com
टि.आर.सि. पदाधिकारीका लागि ६४ जनाको आवेदन
काठमाडौं । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगको (टि.आर.सि. ) पदाधिकारीका लागि ६४ जनाको आवेदन परेको सिफारिस समितिका सदस्य प्रदीप पोखरेलले बताएका छन् ।
सिफारिस समितिले विज्ञापन गरेको एक महिनामा ती आवेदन परेको सदस्य पोखरलले बताए । पोखरेलकाअनुसार आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि ३७ जनाले आवेदन दिएका छन् भने बेपत्ता छानबिन आयोगका लागि २७ जनाको आवेदन परेको हो ।
सरकारले गत असोज १ गते एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो । कार्यविधि निर्माण भएपछि आवेदनका लागि सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो ।